ပေါ့ပါးစွာသုံးနိုင်မဲ့ My Screen Recorder (Full Version) + Crack - .::just for share::.
Home » screen recorder » ပေါ့ပါးစွာသုံးနိုင်မဲ့ My Screen Recorder (Full Version) + Crack
ပေါ့ပါးစွာသုံးနိုင်မဲ့ My Screen Recorder (Full Version) + Crack
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော် My Screen Recorder ဆိုတဲ့ ကွန်ပြူတာရဲ. Screen Chapter ကိုဖမ်းယူ record လုပ်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် သုံးဖူးသမျှ တွေထဲမှာ အပေါ့ပါးဆုံးလို.ပြောလို.ရပါတယ် ကျွန်တော်တို.ကျူတိုရီရယ် Video ဖိုင်လေးတွေလုပ်ပြတဲ့အခါမှာ ဒီလိုဆော့ဝဲလ်မျိုးလေးတွေသုံးရပါတယ် ဒီလို record လုပ်နေစဉ်မှာ ကွန်ပြူတာဟာပုံမှန်ထက် နည်းနည်း လေးလံနေပါတယ်
အင်တာနက်လိုင်း ရောကွန်ပြူတာရောလေးနေတဲ့အတွက် အဆင်မပြေမှုလေးတွေနဲ.ကြုံတွေ.ရပါတယ် အခုဒီဆော့ဝဲလ်လေး ကို စမ်းကြည်.တဲ့အခါ ကွန်ပြူတာမှာ record လုပ်ထားမှန်းတောင်မသိအောင်ပဲပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးနိုင်နေတာ ကြောင့် အရမ်းကြိုက်သွားတာပါ ဒီကောင်လေးကို အခုမှစမ်းကြည်.မိတာပါ ဒီစာရေးနေတဲ့ အချိန်နဲ.ဆိုရင် တစ်နာရီတောင်မပြည်.သေးပါဘူး ချက်ခြင်းတင်ပေးလိုက်တာပါ ကျွန်တော်အကြိုက်တွေ.သွားသလိုကြိုက် ကြလိမ့်မယ်လို.လဲယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ တွေ.ရှိစမ်းသပ်တာတစ်နာရီ တောင်မပြည်.သေးတာကြောင့် တွေ ရှိချက်ထူးထူးခြားခြားတစ်စုံတစ်ခုများတွေ.ခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေအတွက်လဲအဆင်ပြေအောင် အောက် မှာသာမန်.ပေးခဲ့ဖို.လဲတောင်းဆိုပါတယ် စမ်းသုံးကြည်.ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ